Umlando We-imeyili Nokwakhiwa Kwe-imeyili | Martech Zone
Umlando We-imeyili Nokwakhiwa Kwe-imeyili
ULwesibili, May 9, 2017 ULwesine, May 11, 2017 Douglas Karr
Eminyakeni engu-44 edlule, URaymond Tomlinson ubesebenza kwa-ARPANET (owandulela uHulumeni wase-US kwi-Intanethi etholakala emphakathini), futhi wasungula ne-imeyili. Kwakuyinto enhle kakhulu ngoba kuze kube yilelo phuzu, imilayezo yayingathunyelwa kuphela futhi ifundwe kukhompyutha efanayo. Lokhu kuvumele umsebenzisi nendawo okuyiwa kuyo ehlukaniswe uphawu & Lapho ekhombisa uzakwabo uJerry Burchfiel, impendulo yathi:
Ungatsheli muntu! Lokhu akuyona into okufanele sisebenzele kuyo.
I-imeyili yokuqala uRay Tomlinson ayithumele kwakuyi-imeyili yokuhlola uTomlinson echazwe njengengabalulekile, into efana ne- “QWERTYUIOP”. Ukushesha phambili namuhla futhi kunama-akhawunti we-imeyili angaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezine kanti ama-4% awo anikelwe amabhizinisi. Kulinganiselwa ukuthi kuzoba nama-imeyili acishe abe yizigidi eziyizinkulungwane ezingama-23 athunyelwe kulo nyaka kuphela nokukhula okuqhubekayo kwama-200-3% minyaka yonke ngokusho kwe Iqembu leRadicati.
Umlando Wezinguquko Zokwakhiwa Kwe-imeyili
Izindela ze-imeyili ihlanganise le vidiyo enhle ngokuthi yiziphi izici nokusekelwa kwesakhiwo okungeziwe ku-imeyili eminyakeni edlule.
Engikufisa kuphela nge-imeyili ukuthi amaklayenti afana neMicrosoft Outlook azothuthukisa ukwesekwa kwawo kwe-HTML5, i-CSS nevidiyo ukuze sizisuse kukho konke ubunzima bokwenza ama-imeyili abukeke kahle, adlale kahle, futhi alingane kuwo wonke amasayizi wesikrini. Ingabe lokho kungaphezu kokubuza?
Tags: anti-ubugebengu bokweba imininingwane ebucayiI-AOLi-barack obamai-can-spamdkimI-DMARCimeyiliimeyiliumlando we-imeyiliimeyili MarketingftcGmailamathebhu we-gmailumlando we-imeyilihotmailLOLukubuka kweMicrosoftMMSe-North Koreaumbonoukuphingaukufinyelelasonyugaxekileimithetho yogaxekilei-spfama-simpsonsUneposi
Douglas Karr Tuesday, May 9, 2017 Thursday, May 11, 2017
Yeka ukuthi iBig Data Analytics Isibe Yini Esibalulekile kuma-DSP
Amalungelo Amafu: Shintsha Ukususwa Kwamalungelo Okuqukethwe ku-Real-Time
Jun 19, 2011 ku-1: 27 PM
Futhi emuva kwayo yonke le minyaka, isekhona indawo ekukhangiseni nge-imeyili